Fon-jazanao madio sy tsara tarehy | Fondation des Choisis de Jésus
Fon-jazanao madio sy tsara tarehy
3A_21: Anaka, izaho, Jesoa, no maniry ny hiresaka amin’ny fon-jazanao kely tsara tarehy. Raha mba fantatrao fa tena tiako ny fon-jazanao madio sy tsara tarehy ! Tena ho faly Aho raha omenao Ahy ny alàlana hitahiry azy hadio ! Hametrahako tafik’Anjely hanodidina anao mba hiaro anao amin’ny tontolon’ny maizina izay iainanareo. Mirehi-pitiavana anao ny Foko.